Xog: Waa Kuma Horjoogaha Alshabaab ee ay wadajirka u qabteen Ciidamadda Maraykanka iyo Somalia,? – Hornafrik Media Network
Hornafrik waxay Saakay idiin soo bandhigtay Horjooge sare oo lagu qabtay Hawlgal ay wadajir uga sameeyeen Ciidamadda Maraykanka iyo Somalia Magaaladda Gaalkacyo.
Waa Kuma Horjoogahaasi,?
Horjoogahan oo ka tirsan Kooxda Alshabaab ayaa lagu magacaabaa C/risaaq Tahliil, Waxa uuna ahaa Khabiir ku taqasusay Qaraxyadda, isagoona ah Madaxa Kooxda Farsamayaqaanadda ah ee Diyaariya Qaraxyadda ay ku sameeyaan Ismiidaaminta Kooxda, Waxaana markii la qabanayay uu qorshaynayay Qaraxyo uu ka sameeyo Magaaladda Gaalkacyo iyo deegaano kale oo dhaca Gobaladda Mudug iyo Nugaal.
Afhayeen u hadashay ciidamada Milatariga Maraykanka ee Afrika ayaa sheegtay in Cabdirizak Tahlil oo lagu eedeynayo in uu ka caawinayay ururka Alshabaab sameynta waxyaalaha qarxa ay soo qabteen ciidamada Soomaaliya oo gacan ka helaya Ciidamadda Maraykanka.
Tahlil ayaa la sheegay in lagu soo qabtay howlgal la sameeyay subaxnimadii Axada ee aynu ka soo gudubnay, hase yeeshee lama shaacin goobta laga soo qabtay. Waxayse Hornafrik ogaatay in laga soo qabtay Magaaladda Gaalkacyo.
Tahliil waxa uu ka mid ahaa Maxkamadihii Islaamiga ah ee Somalia, isagoo kadibna markii ay Ciidamadda Itoobiya soo galeen Somalia u qaxay Maraykanka Sannadkii 2006-da, halkaas oo uu Qaxootinimo isaga dhiibay. Waxayna Dawladda Maraykanka u oggolaatay Magangalyo Qaxootinimo, isagoo la siiyay Sharciga loo yaqaan Green Card-ka, balse Sannadkii 2009-ka ayaa ka soo tagay Maraykanka, isagoo soo maray Uganda oo uu kadib uga soo gudbay Kenya, halkaas oo uu Xadka ka soo tallaabay, sida ay ogaatay Hornafrik.
C/risaaq Tahliil ma ahayn Muwaadin Maraykan ah ee waxa uu haystay Sharciga Qaxootiga Maraykanka, isagoona intii uu daganaa Maraykanka ku noolaa Minnesota, halkaas oo ay dagan yihiin Qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ah ee Maraykanka Magangalyadda ku jooga,
Maamulka Trump ayaa dhowaan waxa uu oggolaaday in la xoojiyo howlgalada lagula dagaalamayo ururka Alshabaab oo ah ururka ugu weyn ee argagaxisada Afrika.